စိတ်ဖိစီးမှုများကိုကိုင်တွယ်ရာတွင် mesoaccumbens သည် dopamine (2012) - Your Brain On Porn
neuroscience Biobehav ဗျာ 2012 Jan;36(1):79-89. doi: 10.1016/j.neubiorev.2011.04.012.
Cabib S က1, Puglisi-Allegra S က.
Mesoaccumbens dopamine (DA) ကစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အာရုံကြောယန္တရားများနှစ်ဦးစလုံးလက်တွေ့နှင့် preclinical သုတေသနအတွက်အရေးကြီးကြောင်းကွသျောလညျး mesoaccumbens DA အားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုနည်းနည်းအာရုံစိုက်မှုခံရကြပြီ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဤရလဒ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအတွက် mesoaccumbens DA များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအဆိုတင်သွင်းဖို့ရည်ရွယ်။ ပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါဒေတာလုပ်သူများအဆင့်ဆင့်၏အတက်အကျဟာ mesoaccumbens DA စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများသောအမြင်ထောက်ခံပါတယ်။
နျူကလိယ accumbens အတွက်လုပ်သူများ DA အဆင့်ဆင့်၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုး (NAc) DA ၏တားစီးတက်ကြွခုခံကာကွယ်တုံ့ပြန်မှု၏ချုပ်ရာနှင့်ဆက်စပ်သည်သော်လည်း, DA D2 receptors ၏ activation မှတဆင့်ဖိအားဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားရည်ရွယ်တုံ့ပြန်မှု၏စကားရပ်ကို support.
ဝတ္ထုအက်စကက် / မထိန်းချုပ်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများအတွက် NAc အတွက် DA ၏လုပ်သူများအဆင့်ဆင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးစိတ်ဖိစီးမှုခွအေနအေအဖြစ်ကြာရှည်ခံကြောင်း Pre-စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ဆင့်ကိုအောက်တွင်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကာကနဦးတိုးပြသပါ။ ဤသည် biphasic တုံ့ပြန်မှုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဒါမှမဟုတ်သက်ရှိကထိန်းချုပ်ထား, ဖယ်ရှားမရနိုငျသောဖိအားများ၏မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းအကဲဖြတ်၏ဒိုင်းနမစ်နှင့်အတူကိုက်ညီ။ တကယ်တော့, NAc DA အတက်အကျစိတ်ဖိစီးမှုအကဲဖြတ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သော medial Pre-တိုကျရိုကျ cortex ကထိန်းချုပ်ထားရသည်။
ကျနော်တို့တိုးမြှင် mesoaccumbens DA တစ်ဖိအားအဖြစ်တန်ဖိုးဖြတ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဆန့်ကျင်တက်ကြွဖြေရှင်းမဟာဗျူဟာ၏စကားရပ်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် DA ၏တားစီးမထိန်းချုပ် / အက်စကက်အဖြစ်တန်ဖိုးဖြတ်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း passive လိုအပ်ကြောင်းတင်ပြသည်။
မူပိုင်ခွင့်© 2011 Elsevier, Ltd. All rights reserved ။